ညီမျှချင်းမြန်မာ Equality Myanmarက ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်း ကို တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်စွာယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့်တွေ ချိူးဖောက်ခံနေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အပေါ် လေ့လာ ပြုစုထားတဲ့ သုံးသပ်ချက် စာတမ်း ကို ညီမျှချင်းမြန်မာ Equality Myanmar က ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ Orchid Hotel မှာ ဒီကနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ထုတ်ပြန် လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ညီမျှချင်းမြန်မာ Equality Myanmar က ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိူးမင်းက သူတို့တွေ့ရှိ ချက်တွေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဒီ သုတေသနကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ကျနော် အခြေအနေအလိုက် လိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်တာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ရရှိတဲ့ သတင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက ဘာသာပေါင်းစုံကိစ္စတွေကို ဖမ်းတာတွေ၊ နောက် ရန်ကုန် မှာ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကို ဈေးရောင်းခွင့်မပြုတာတွေ၊ နောက်တစ်ခုက ကရင်ပြည်နယ်မှာ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်း ကြီးကျောင်းအတင်းဖွဲ့တာတွေ၊ အဲ့ဒါကဖြစ်နေတာက အများကြီး၊ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ တိတိကျကျပြောနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာကို ပြောတာပါ"
အဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်စာတမ်းထဲမှာ မျိူးစောင့်ဥပဒေလေးရပ်စလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခွင့်တွေကို ထိခိုက်နေကြောင်း ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရသစ် ကို တိုက်တွန်းသွားမယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်စာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်ရေးလေ့လာသူတွေ စုပေါင်းပြီး ပြုစုထား တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းကို အာအက်ဖ်အေ သတင်းထောက် မဝေမာထွန်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းဖို့ လူထုအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်း
Blaming is Useless & Unwise. Do what you can do with your best Individually/Collectively for the Dignified Survival of your Faith(s).
My Salute to the Equality Myanmar's Director & his team. May God Bless them with Success in Carrying out the Noble Task. Such Unwanted behaviors are spreading far & wide of the Nation because Gov itself has been Supporting it overtly & covertly since the time of its birth for their self interests.
Feb 28, 2016 08:16 PM